China Electric hama malite ịgba bit, ihe malite ịgba bit, SDS, Max, Hex, percussion bit, perforator, malite ịgba ibe n'ibe ụlọ ọrụ na-emepụta | Boda
Electric hama malite ịgba bit, ihe malite ịgba bit, SDS, Max, Hex, percussion bit, perforator, malite ịgba ibe n'ibe
Electric hama bit bụ ụdị electric rotary hama akuakuzinwo na nchekwa ipigide mmasị na pneumatic hammering usoro. Ọ nwere ike mepee oghere 6-100 mm na ihe ndị siri ike dịka ihe, brik, nkume, wdg, na arụmọrụ dị elu.
E nwere ọtụtụ ụdị nke electric hama malite ịgba ibe. Mgbe anyị na-egwupu ihe dị iche iche, anyị na-eji blọọtọ dị iche iche. N'ezie, ụdị dị iche iche nke ịkụ ala dị iche iche. Ọ bụrụ na anyị na-echegbu onwe anyị banyere ịzụrụ ihe ọjọọ, anyị kwesịrị iji nlezianya mụọ nkọwa na ụdị nke igwe eletriki igwe. Naanị otu a ka anyị nwere ike isi mata ma anyị chọrọ igwe egwu. Ka anyị nwere anya na nkọwa na ụdị nke electric hama ibe n'ibe?
Nkọwa nke igwe hama eletrik: 6 mm, 8 mm x 110 mm; 8 mm x 160 mm; 8 mm, 10 mm, 12 mm x 10 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm x 450 mm etc.
The isi ahu nke sikwuo carbide hama malite ịgba ka nke elu-edu alloy ígwè, na cutter isi na-welded na sikwuo carbide. Enwere ike iji ya na ụdị igwe ọkụ ọ bụla. O kwesịrị ekwesị maka ịkụ ala na ihe, brik na ihe ndị ọzọ na-arụ ụlọ siri ike. Ọ bụ mkpọpu ala ngwá ọrụ na mbara ngwa na elu arụmọrụ na-ewu na echichi ụlọ ọrụ.
The nkọwapụta nke electric hama malite ịgba set bụ: 5 * 110mm, 6 * 110mm, 6 * 160mm, 8 * 160mm, 10 * 160mm wdg
Gburugburu ahụ na square ahụ nke electric hama akuakuzinwo
6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 16mm-28mm wdg.
Ogologo nke site na mgbidi mgbidi bụ 350mm
Njirimara nke electric hama bit
1. Ezi usoro ujo absorption: nwere ike ime ka onye ọrụ jidere ahụ iru ala ma belata ike ọgwụgwụ. Tozọ iji mezuo nke a bụ site na "sistemụ njikwa vibration"; a na-eji rọba rọba ejiri mee ka nkasi obi na-ejide;
2. Kpọmkwem ọsọ ọsọ mgba ọkụ: mgbe ndị mgba ọkụ na-ejighị ya kpọrọ metụrụ, adiana ọsọ bụ ala, nke nwere ike inyere igwe dọpụta were were (ọmụmaatụ, Anam Udeme si a ezigbo elu dị ka taịl nile, nke nwere ike ọ bụghị naanị igbochi bit site na ịmịpụ, ma gbochie mkpọpu ala ahụ. Enwere ike iji nnukwu ọsọ na arụ ọrụ nkịtị iji hụ na arụmọrụ arụmọrụ.
3. Anụ na a pụrụ ịdabere na nchekwa ipigide: makwaara dị ka torque na ịmachi ipigide, ọ nwere ike izere akwa torque mmeghachi omume ike site n'ịnọgide nke malite ịgba bit n'oge iji usoro, nke bụ ụdị nke nchebe nchebe maka ọrụ. Njirimara a na - egbochi igwe na akuku moto.
4. Comprehensive moto nchebe ngwaọrụ: na ojiji, ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere na granular ihe siri ike ga-abanye igwe (karịsịa maka ịkụ ala elu na igwe ahụ, dị ka ịkụ elu n'elu mgbidi). Ọ bụrụ na moto ahụ enweghị nchebe ụfọdụ, ọ dị mfe ịnwe ngwa ngwa ma ọ bụ kpụchaa ya site na ihe ndị siri ike na ntụgharị ọsọ ọsọ, nke ga-emecha mee ka ọ ghara ịdaba.
5. Gaanụ n'ihu ma laa azu ọrụ: ọ nwere ike ime ka hama were ọtụtụ ebe, ma ụdị nnabata ya na-ahụkarị site na ịgbanye ma ọ bụ dozie ọnọdụ nke ahịhịa carbon. N'ozuzu, nnukwu ihe eji emepụta ngwa ngwa ga-edozi ọnọdụ nke ahịhịa carbon (onye na-ejide ihe ntanye), nke nwere uru nke ịrụ ọrụ dị mma, mmebi nke ọkụ na-egbuke egbuke iji kpuchido onye na-agagharị ma mee ka ọrụ ụgbọ ala ahụ dịkwuo ogologo.
6. Hammer malite ịgba sọrọ ọrụ
Gịnị ka anyị kwesịrị ị attentiona ntị na mgbe eji electric hama bit?
1.Matters chọrọ nlebara anya na ojiji nke ntakịrị igwe ọkụ eletrik - gosipụta ma ikike ọkọnọ ejikọtara na saịtị ahụ dabara na efere aha igwe ọkụ. Ma leakage nchebe a jikọtara. Nke malite ịgba bit na njide ga-ekwekọkwa na arụnyere nke ọma.
2. Nlekọta maka ojiji nke igwe eletriki igwe - mgbe ị na-egwu mgbidi, uko ụlọ na ala, ọ dị mkpa iji gosi ma enwere eriri ma ọ bụ ọkpọkọ. Mgbe ị na-arụ ọrụ n'ebe dị elu, fullaa ntị nke ọma na nchekwa nke ihe na ndị na-aga ụkwụ n'okpuru, ma debe akara ngosi mgbe ọ dị mkpa.
3. Nlezi anya maka ojiji nke igwe eletriki igwe eletrik - gosi ma ewepụla ngbanwe na hama. Ọ bụrụ na agbanyere ike ọkụ, akụrụngwa eletrik ga-agbanye na mberede mgbe etinyere plọg ahụ n'ime oghere ike, nke nwere ike ibute mmerụ ahụ. Ọ bụrụ na ebe ọrụ dị anya site na ntinye ike, eriri mgbatị nwere ikike zuru oke yana nrụnye ruru eru ga-eji. Ọ bụrụ na eriri ndọtị gafere n'okporo ụzọ na-agafe agafe, ọ ga-ebuli elu ma ọ bụ mee ihe iji gbochie eriri igwe anaghị akụda ma mebie
BOSENDA Electric Hammer Drill Bit / Concrete Drill Bits / Drill Bits / Electric Drill ka nke 40Cr nchara na nke mbụ yg8c tungsten alloy. Na nlezianya akara nke elu okpomọkụ okpomọkụ ọgwụgwọ usoro, ngwaahịa arụ a zuru okè Nchikota ekweghị ekwe na ike, na ya elu ọgwụgwọ bụ kwesịrị mma.
A na-eji ihe eji eme ihe dị elu iji mee ka mkpọpu ahụ dị nkọ ma na-eguzogide ya, mee ka ndụ ahụ dịkwuo ogologo ma melite mmetụta nkwụsị.
Ihe ngwugwu a na - adi na ocha plastic di ocha, enwere ike hazie ya dika ihe ndi ahia choro.
Ọzọ ụdị malite ịgba ibe n'ibe ka nke carbon steel.But na 40Cr malite ịgba bit nwere a ọzọ ezigbo ọdịdị na a ogologo ọrụ ndụ ọtụtụ ugboro karịa carbon ígwè mkpokọta malite ịgba bit.
Ngwaahịa: ọtụtụ-eji maka egwu na marble, granite, ihe, ciment, mgbidi brik na ihe ndị ọzọ.
Ihe aka nwere max, SDS, hex na nhazi ndị na-abụghị nke ọkọlọtọ.
Rịba ama: ọkpụrụkpụ mabul ga-abụ ihe karịrị 50 mm, na nkwalite kwesịrị izere mgbe ị na-egwu mmiri na ihe.
BOSENDA Electric Hammer malite ịgba Bit na-enye zuru ezu nha. Nwere ike izute ihe achọrọ maka mkpa niile na mkpọpu mmiri.
Nke gara aga: Construction malite ịgba bit, multi-ọtọ alloy malite ịgba, seramiiki tile iko malite ịgba bit, metal malite ịgba, Overlord malite ịgba, mabul mgbidi malite ịgba, sikwuo carbide oghere hụrụ
Osote: Anọ uzo anọ na onu woodworking broach bit, atọ agụba anọ n'ọnụ rotary malite ịgba, osisi dakpuo ibe n'ibe.
Nzọụkwụ malite ịgba, titanium plated nzọụkwụ malite ịgba, hegzagon ...
Construction malite ịgba bit, multi-ọtọ alloy ...
Woodworking atọ kapịrị akuakuzinwo, woodworking dr ...
Woodworking square oghere malite ịgba, Wood malite ịgba bit, W ...
Anọ uzo na anọ onu woodworking broach bi ...
Multi ọtọ ihe malite ịgba, seramiiki tile d ...